Akpa mkpuchi mkpuchi isi mkpuchi silk nke Silicone
Nkọwa:Isi mkpuchi isi mkpuchi Silicone,Obere Silicone Car Key Fob Cover Cover,Ilekọta Nchedo Gbasara Silicone
Home > Ngwaahịa > Epeepe mkpuchi Silicone Car > Akpa mkpuchi mkpuchi isi mkpuchi silk nke Silicone
Ihe Nlereanya.: VW1207
Earth Co.Ltd mara mma na-elekwasị anya na ịmepụta ngwangwa magneti na mkpuchi mkpuchi ụgbọala maka afọ asaa. Ọtụtụ afọ 'ahụmahụ maka mmepụta nke na-eme ka anyị nwee usoro nhazi dị mma. Ntube mara mma nke VW S ilicon Cover Cover , ezigbo ngwaahịa ngwaahịa na ọrụ ahịa zuru oke ga-abụ nkwa maka gị.
Ihe ọ bụla ị na-eji ígwè ịkwọ ụgbọala nwere atụmatụ ndị a:
2. Ihe mkpuchi mkpuchi mkpụrụ ndụ dị na silicone zuru oke maka akara VW GTI 3 bọtịnụ bọtịnụ .
3. Anyị nwere ike ịme ihe ọ bụla nwere ike ịchọta ụda nke ihe dịka ịchọrọ ụgbọala dị ka ịchọrọ.
6. Silicone isi okwu ntanetị nwere àgwà ndị na-adịghị emerụ ahụ, gburugburu ebe obibi enyi na enyi, okpomọkụ na-eguzogide, na-adịgide adịgide, mmiri na-adịghị ahụkebe, ihe nkwụ.
Onye na-ejide ya na Silk car maka VW GTI abụghị ihe ọjọọ ma dị mma na gburugburu ebe obibi. Mgbe ị na-ejide ihe mkpuchi mara mma mara mma maka VW GTI n'aka gị, ọ na-adị nro, dị mma na ìhè. Ị ga - ahụ VW GTI silicone mkpuchi mkpuchi ụgbọ ala mgbe ị nwere ya.
Ị ga -ahụ bọtịnụ akpaaka 3 ájá - àmà silicone jel ụgbọ ala isi cover mgbe ị nwere ya. Ụdị agba ọ bụla nwere ike ịdọrọ ike
Isi mkpuchi isi mkpuchi Silicone Obere Silicone Car Key Fob Cover Cover Ilekọta Nchedo Gbasara Silicone Isi mkpuchi mkpuchi Silicone Ihe mkpuchi mkpuchi Silicone Ikpuchi mkpuchi Silicone Ikpuchi mkpuchi mkpuchi Silicone Isi mkpuchi isi mkpuchi